Malunga nathi - Haidari Beauty Technology Co., Ltd
Yasekwa ngo-2014, iHaidari Beauty Technology (Beijing) Co., Ltd ngumenzi wobuchule ojolise kuphando kunye nokuvelisa izixhobo zelaser kunye nezoBugcisa zelaser kunye nomatshini womzi mveliso eTshayina.
Ubuhle beHaidari ikakhulu bunikezela nge-CO2 laser fractional (unyango lwelungu lobufazi kunye nevalvu, ukulungiswa kwesikhumba, ukuvuselelwa kwesikhumba), i-Picosecond laser, i-Erbium laser (1550nm, 2940nm), umatshini wokucheba i-laser, umatshini wokususa iinwele we-808nm, umatshini wokumakisha, njl.
Ubuhle beHaidari bukwabonelela ngeenkonzo ze-OEM kunye ne-ODM esekwe kwiminqweno yabathengi.
Njengobuhle beHaidari njengenxalenye yeshishini lakho, unokukhuthaza kwaye uxhobise abathengi bakho ukuba baphucule ubuhle babo kwaye baphucule umgangatho wabo wobomi ngonyango olukhuselekileyo, olunokuxelwa kwangaphambili kunye nolusebenzayo.
Oko yasekwa, inkampani ibambelele kwimigaqo emine "yomgangatho wokuqala", "umthengi kuqala", "inkonzo yokuqala" kunye "nodumo kuqala". Sijonge phambili kubukho bakho kunye nentsebenziswano, kunye nokwenza imigudu edibeneyo yesizathu se-laser kunye nomzi mveliso wesizwe wase China.
Inkampani ineqela elikwinqanaba eliphezulu elektroniki, oomatshini bokujonga kunye nokuchaneka koomatshini kuphando lwabasebenzi, kunye nezixhobo zokulinganisa eziphambili zamanye amazwe, ukuphucula inkqubo yemveliso efanelekileyo kunye nenkqubo yolawulo lomgangatho olungqongqo, ukuqinisekisa umgangatho weemveliso zethu.
Iqela elinamandla lobugcisa
Inkampani igxile ekuveliseni izixhobo zokusebenza eziphezulu, amandla ezobuchwephesha, amandla ophuhliso olomeleleyo, iinkonzo ezilungileyo zobugcisa
Iimveliso zethu zinekhwalithi elungileyo kunye nekhredithi yokuvumela ukuba sikwazi ukuseta iiofisi zamasebe kunye nabasasazi kwilizwe lethu.
Nokuba iyathengiswa ngaphambili okanye emva kwentengiso, siya kukubonelela ngeyona nkonzo intle ukukwazisa kwaye usebenzise iimveliso zethu ngokukhawuleza.